Tapa-bolana taorian’ny nahitana ny razana: hampodiana anio ny fatin’i Alana Cutland | NewsMada
Vita ny fizahana ny razana (autopsie) natao tetsy amin’ny HJRA. Vita ihany koa na somary naharitra aza ny fikarakarana ny taratasy samihafa. Raha tsy misy ny fiovana, hampodiana anio any Grande Bretagne ny fatin’ i Alana Cutland, ilay tovovavy britanika nilatsaka avy eny ambony fiaramanidina tany Anjajavy, iray volana lasa izay.
Fantatra, nandritra ny fihaonana tamin’ny alalan’ny fisaorana sy ny fankasitrahana nataon’ny masoivohon’i Grande Bretagne ny zandarimariam-pirenena sy ny fanjakana malagasy noho ny fandraisana an-tanana ny fikarakarana nataon’ny zandarimaria tamin’ny loza nanjo ilay teratany britanika nitsambinkina avy eny ambony fiaramanidina tany Anjanjavy, iray volana lasa izay. Nankasitraka ny ezaka nataon’ny fokonolona sy ny zandary any an-toerana koa izy tamin’ny fikarohana ny razana ary nisaotra ny fanjakana tamin’ny fampiakarana ny razana teto Antananarivo. Nanambara izany fankasitrahana izany avokoa ny haino aman-jery britanika, araka ny fanazavany. Raha tsy misy, araka izany, ny fiovana amin’ny ora farany, hihazo an’i Grande Bretagne, anio, ny fatin’i Alana Cutland rehefa avy nanaovana “autopsie” teny amin’ny HJRA. Tsiahivina fa ny 25 jolay 2019 lasa teo no nilatsaka avy eny ambony fiaramanidina teo ambonin’ny helodranon’i Mahajamba ity teratany britanika ity. “Natao avokoa ny ezaka rehetra tamin’ny fikarohana azy ary nisy zandary telo nitarika ny fikarohana ny fatiny tany an-toerana. Teo ny fikarohana an-tanety sy an-dranomasina”, araka ny fanazavan’ny lehiben’ny fari-piadidian’ny zandarimariam-pirenena (CIRGN) ao Mahajanga, ny Kly Ralaivoanary Andrianoasy D’y La Paix. Nisy ny fikarohana niarahan’ny zandary tamin’ny fokonolona ka 10 andro mahery taorian’ny nilatsahany vao hita ny fatiny. Mpianatra mpikaroka momba ny drakaka ity tovovavy britanika ity ka ny 16 jolay izy no tonga tany Anjajavy hanao ny fikarohana. Tsy tomombana anefa ny fikarohana nataony ary nisy ny fifampiresahany tamin’ireo ray aman-dreniny amin’ny hanajanonana ny fikarohana fa hoe aleo mody.
Hidina any Anjajavy ny Seg sy ny masoivohon’i Grande Bretagne…
Hisy, ato ho ato, ny fotoana hiaran’ity masoivoho ity sy ny Seg ary ny fanjakana malagasy hidina any an-toerana nitrangan’ny loza hisaotra ny vahoaka tamin’ny fikarohana nataon’izy ireo. Nilaza ny Seg fa toerana somary manana ny fadifadiny ity toerana nilatsahan’i Alana Cutland satria tsy afaka mitazona faty io toerana io. Nisy mihitsy aza ireo zandary saika niharan’ny fitsaram-bahoaka nandritra ny fotoana nikarohana ny razana, araka ny nambarany. Nilamina ihany anefa ireo mponina any an-toerana taorian’izay. Nohamafisiny koa aza fa efa fantatra fa i Alana Cutland io hita faty io ka tsy tokony hasarotina intsony ny fikarakarana rehetra amin’ny hampodiana ny fatiny any an-tanindrazany.
Marihina fa nitsidika ny Sekreteram-panjakana miadidy ny zandarimariam-pirenena (Seg), ny Jly Ravalomanana Richard, ny masoivohon’i Grande Bretagne, afakomaly teny amin’ny Toby Ramarolahy eny Betongolo.